2010-01-31 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
.exe icon ​ကို ​ဘယ်​လို ​ပြောင်း​မ​လဲ
​ဒါ​က​တော့ ​ညီ​ငယ်​လား ​ညီ​မ​ငယ်​လား ​မ​သိ​ဘူး ​လာ​မေး​နေ​လို့ ​ကျွန်​တော် ​ပို့စ်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အ​စ​က ​မ​တင်​ဘူး​လို့​ဘဲ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အား​လုံး​ကို ​သိ​စေ​ချင်​တာ ​တစ်​ချက်​ကို​လဲ ​ပြော​ရင်း​နဲ့ ​ပို့စ်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​ဘာ​ကို ​သိ​စေ​ချင်​တာ​လဲ ​ဆို​ရင် ​တစ်​ချို့​တွေ​က ​မိ​မိ Download ​လုပ်​ထား​တဲ့ program ​ဟာ ​တစ်​ကယ် ​အ​မှန်​အ​ကန်​လား virus ​လား​ဆို​တာ​ကို ​သေ​ချာ ​မ​စစ်​ဘဲ ​ဖိုင်​တွေ့​ရင် Double click ​ပဲ ​နှိပ်​တတ်​တဲ့ ​သူ​များ​အ​တွက် virus ​ဆို​တာ ​ဝင်​ရ​လွယ်​ကူ​ပါ​တယ် . virus ​ဆို​တာ​က​လဲ ​သူ့​ဟာ​သူ ​နေ​ရင် ​ဘာ​မှ​မ​ဖြစ်​ဘူး . ​အင်း ​ကို​ကိုယ်​တိုင်​က ​သွား​ပြီး​တော့ virus ​ဖိုင်​ကို Double click(run) ​လိုက်​တာ​နဲ့ ​အဲ့​ဒီ့ virus ​ဟာ ​စ​ပြီး​တော့ ​အ​လုပ်​လုပ်​တာ​ပါ . ​အဲ့​တော့ ​တစ်​ကယ့်​တစ်​ကယ် "virus ​ဝင်​တယ်" "virus ​ဝင်​တယ်" ​နဲ့ ​တ​ရား​ခံ​က ​ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင် ​ဆို​တာ​ကို ​မ​သိ​ကြ​ဘူး. ​မိ​မိ ​နှိပ်​လိုက်​လို့ ​ဝင်​သွား​တဲ့ virus ​ကို ​သူ​များ​က​ပဲ stick ​ထိုး​ပြီး ​ထည့်​သွား​သ​လို​လို​နဲ့ ​ပြော​တဲ့ ​သူ​များ​ကို​လဲ ​တွေ့​ခဲ့​ရ​ဖူး​ပါ​တယ် . virus ​အ​များ​ဆုံး​ခို​အောင်း​နေ ​နိုင်​တဲ့ ​ဆိုက်​တွေ​ဟာ porn ​ဆိုက်​တွေ​ပါ . ​အဲ့​တော့ porn ​ဆိုက်​တွေ​မှာ ​ဒီ​အ​တိုင်း​လေး ​ကြည့်​နေ ​ဘာ​မှ​မ​ဖြစ်​ဘူး .
​အင်း​ဟို​ဟာ​နှိပ် ​ဒီ​ဟာ​က​လစ် ​ဆို​ရင်​တော့​ဖြင့် virus ​က ​ရှေ့​ဂျွန်း​တွေ ​နောက်​ဂျွန်း​တွေ ​ပြစ်​ပီး​တော့​ကို ​ဝင်​လာ​မှာ . ​ကွန်​ပျူ​တာ​က ​သ​တိ​ပေး​ရင်​လဲ ​ဘာ​ပေါ်​တာ​လဲ ​မ​ကြည့်​ဘူး YES (or) OK ​ချည်း​ပဲ ​နှိပ်​လိုက်​တော့ . ​သွား​လေ​ပြီ kaspersky ​က​လဲ ​မ​နိုင်​တော့​ဘူး . ​ဘယ်​နိုင်​မ​လဲ virus ​ပါ​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို install ​လုပ်​မှာ​လား . ​ဘာ​ညာ ​မေး​လာ​ရင်​လဲ ​ပါ​လား ​မ​ပါ​လာ​လား ​မ​ကြည့်​တော့​ဘူး . Ok ​ပဲ ​ကိုင်​ထည့်​လိုက်​တော့ . ​ကို​က​တော့ ​အို​ကေ​ပါ​ရဲ့ ​ခ​ဏ​နေ​ကျ​တော့ kaspersky ​လဲ ​မ​နိုင်​တော့​ဘူး . ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ​လဲ ​ဟို​ဟာ​က ​ထ​ဖောက် ​ဒီ​ဟာ​က ​ထ​ဖောက်​နဲ့ ​ဖြစ်​ကုန်​ရော. ​ဖြစ်​မှာ​ပေါ့ . ​ရှေ့​မှာ​ခံ​ထား​တဲ့ kaspersky ​နှင့် ​အ​ခြား antivirus program ​တွေ​ကို ​န​ဘန်​ကျင်း၊ ​ဖ​နောင့်​နဲ့ ​ပေါက်​ပြီး​တော့ ​ဝင်​ခွင့် ​ပေး​လိုက်​တော့ . ​သူ​တို့​က​လဲ ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ပြီး​တော့ ​တား​နိုင်​တော့ ​မှာ​လဲ . ​ခ​ဏ​နေ​ကျ​တော့ ​သူ့​အ​လုပ်​ကို​သူ​လုပ်​တဲ့ anti virus program ​ကို ​အ​ပြစ်​ပြော​ပါ​လေ​ကော . ​တင်​ထား​လိုက်​တဲ့ ​ဘယ် antivirus program ​က​ဖြင့် ​သောက်​သုံး​ကို ​မ​ကျ​ဘူး . ​ဒီ virus ​ကို​တောင် ​မ​သတ်​နိုင်​ဘူး ​လုပ်​ပါ​လေ​ရော . ​တ​ရား​ခံ​က ​ကို​ဆို​တာ​ကို ​မ​သိ​ဘူး . ​တစ်​ကယ်​တော့ antivirus program ​ဆို​တာ​ဟာ HDD ​ထဲ​ကို ​ဝင်​မယ့် file ​နှင့် Program ​တွေ​ကို virus ​မ​ပါ​သွား​ရ​လေ​အောင် . ​စစ်​ဆေး​ပေး​တာ​ပါ . ​မြို့​အ​ဝင်​က ​ဂိတ်​စောင့်​နှင့်​တူ​ပါ​တယ် . ​မိ​မိ​က​တော့ ​သူ​ကြီး​ပေါ့ . ​ဂိတ်​စောင့်​က ​ဘယ်​လို​မျိုး ​တား​တား ​ကို​ကိုယ်​တိုင်​ကို​က ​ဝင်​ခွင့်​ပေး​လိုက်​ရင် ​ဂိတ်​စောင့်​လဲ ​မ​နိုင်​တော့​ဘူး . ​ဒါ​လေး​တွေ​ကို ​သိ​ထား​ဖို့​တော့ ​လို​ပါ​တယ် .
​နောက်​တစ်​ခု ​သိ​ထား​သင့်​တာ​လေး ​ပြော​ပါ​ဦး​မယ် . ​အဲ့​ဒါ​ကို ​လူ​တိုင်း ​မ​သိ​ကြ​ဘူး​ဗျ . ​ဘာ​လဲ​ဆို​ရင် ​မိ​မိ HDD ​ထဲ​မှာ antivirus program ​မ​တင်​ခင် ​က​တည်း​က virus ​က ​ရှိ​နှင့်​ထား​ပြီး​သား​ဆို​ရင် ​ဘယ် antivirus ​ကို​ပဲ Install ​လုပ်​လုပ် 85% ​လောက်​ဟာ ​မ​ရ​ဖို့​များ​ပါ​တယ် . ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် virus ​တိုင်း​လို​လို​ဟာ ​သူ​တို့ HDD ​ထဲ​မှာ ​ရှိ​နေ​ပြီး​တဲ့​အ​ချိန်​ဆို​ရင် ​အဲ့​ဒီ့ virus ​က ​ဘာ​တွေ​အ​ရင်​ဆုံး ​လှုပ်​ရှား​မ​လဲ​သိ​လား . antivirus program ​လို ​သူ့​ကို ​တိုက်​ခိုက်​မယ့် ​ရန်​လုပ်​မယ့် program ​မျိုး​ကို install ​လုပ်​လို့​မ​ရ​အောင် ​ကာ​ထား​မယ်​ဗျာ . ​နောက်​တစ်​ခု​က task manager ​လို​မျိုး ​သူ့​ကို ​ရပ်​တန့်​အောင် ​ပိတ်​နိုင်​မယ့် Tools ​မျိုး​ကို ​ဖျောက်​ထား​တတ်​ကြ​တယ် . ​အဲ့​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့​က ​အ​ရင်​ဆုံး​လုပ်​သင့်​တာ​က window ​တင်​ပြီး​တာ​နဲ့ antivirus program ​ကောင်း​ကောင်း (kaspersky 2010)​ကို ​တင်​ထား​သင့်​ပါ​တယ် . ​ပြီး​တော့​မှ ​တစ်​ခြား program ​တွေ​ကို install ​လုပ်​ပါ . ​အဲ့​ဒီံ​တစ်​ချက်​က​လေး​ကို ​သ​တိ​ထား​ပေး​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​နောက်​ပိုင်း ​သိ​သင့်​တာ​လေး​တွေ ​ရေး​ပေး​ပါ​ဦး​မယ် . ​အ​ခု​က .exe ​ရဲ့ icon ​ကို ​ဘယ်​လို​ပြောင်း​မ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို ​ပြော​ဖို့​က​နေ ​ဘယ်​ရောက် ​သွား​မှန်း ​မ​သိ​ပါ​ဘူး . ​ဘယ် program ​ကို​မ​ဆို (virus program ​အ​ပါ​အ​ဝင်) program ​ရဲ့ icon ​ကို ​ပြောင်း​လိုက်​လို့​ရ​ပါ​တယ် .
​ဖိုင်​တစ်​ခု​ကို​ဗျာ gmail hacking tool ​လို့ ​နာ​မည်​ပေး​လိုက်​မယ် .
icon ​ကို ​မှန်​ဘီ​လူး ​ကိုင်​နေ​တဲ့​ပုံ​လေး ​ပြောင်း​လိုက်​မယ် . ​ပြီး​ရင် ​ဆိုက်​မှာ​သာ​တင်​ကြည့် ​မ​သိ​တဲ့​သူ​ဆို​ရင် ​ဖိုင်​ကို​ကြည့်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ဟာ​တွေ့​ပြီ​ဟေ့ ​ပွ​တာ​ပဲ ​ဆို​ပြီး ​တန်း​ပြီး​တော့ ​လုပ်​မှာ​က Download ​လုပ်​ပြီး​တာ​နဲ့ Double click ​လုပ်​တော့​မှာ​ပါ . ​ဟုတ်​လား ​မ​ဟုတ်​လား ​မ​စဉ်း​စား​တော့​ဘူး . ​အဲ့​ဒီ့​မယ့် kaspersky ​လဲ ​မ​ကယ်​နိုင်​တော့​ဘဲ ​မာ​လ​က ​ဈာန်​ကွှေ​ရာ .
​ညီ​လေး​ရေ ​အစ်​ကို​အောက်​မှာ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် ​ပြောင်း​နည်း​က​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ် . ​အ​တို​ချုံး​ပြီး ​ပြော​ပြ​လိုက်​ပါ​တယ် .
icon ​ပြောင်း​နည်း .
​မိ​မိ​ပြောင်း​ချင်​တဲ့ logo ​တစ်​ခု​ကို photoshop ​သို့​မ​ဟုတ် ​တစ်​ခြား ​ဒီ​ဇိုင်း​ဖန်​တီး​လို့​ရ​တဲ့ program ​တစ်​ခု​ခု​ဖြင့် ​ဖန်​တီး ​လိုက်​ပါ . ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​သူ့​ကို ​ဆိုက်​သေး​ပြီး​တော့ gif ​နဲ့ ​သိမ်း​လိုက်​ပါ . .ico ​နဲ့ ​တစ်​ခါ​တည်း ​မ​သိမ်း​တတ်​ရင် ​မ​သိမ်း​ပါ​နဲ့. ​နောက်​မှ gif (or) Jpeg ​စ​တာ​တွေ​က​နေ .ico ​ကို ​ပြောင်း​လိုက်​ပါ ​ကျွန်​တော် ​ဆိုက်​ထဲ​မှာ .ico ​ပြောင်း​တဲ့ program ​တင်​ပေး​ထား ​ပြီး​သား​ပါ .
.ico logo ​လေး​ရ​ပြီ​ဆို​ရင် . ​အောက်​က​အ​တိုင်း ​ပြောင်း​ပေး​လိုက်​ပါ . ​အောက်​မှာ ​တစ်​ပုံ​ချင်း​စီ​ကို ​စာ​နဲ့ ​ရေး​ပြီး​တော့ ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ် . ​တစ်​ပုံ​ချင်း​စီ​ကို ​က​လစ်​နှိပ်​လိုက်​ပါ ​ပုံ​အ​ကြီး ​ထွက်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​ပုံ​တွေ​ရဲ့ ​အ​ပေါ်​က icon ​ပြောင်း​ပေး​မယ့် program ​ပါ. ​တစ်​ခု​သ​တိ​ပေး​လိုက်​ပါ့​မယ် ​စိတ်​မ​ကောင်း ​စ​ရာ​ကောင်း​တာ​က window7​ကို support ​မ​လုပ်​ပါ​ဘူး .
Book Name : "Windows7Just the Steps For Dummies"
Publisher: For Dummies |
ISBN: 0470499818 | 2009
internet sharing ​ဘယ်​လို ​ခွဲ​သုံး​မ​လဲ .
​ကို​မြင့်​ဇော် ​မေး​ထား​တာ ​လေး​ပါ . computer (wireless) ​တစ်​လုံး​က​နေ ​တစ်​ခြား​တစ်​လုံး (wireless) ​ကို internet sharing ​ဘယ်​လို ​ခွဲ​ပေး​မ​လဲ​လို့ ​မေး​ထား​တာ​ပါ . ​သ​ဘော ​က​တော့ ​တစ်​လိုင်း​တည်း​ကို ​ကွန်​ပျူ​တာ ​နှစ်​လုံး ​တစ်​ပြိုင်​တည်း ​သုံး​ချင်​တာ ​ပါ​တဲ့ .
(​လုပ်​နည်း​က​တော့ ​နဲ​နဲ​အ​ဆင့်​များ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော် ​ရှင်း​ပြ​တဲ့ ​အ​ထဲ​မှာ ​လို​အပ်​မှု​များ​လဲ ​ရှိ​ကောင်း​ရှိ​နေ​နိုင်​ပါ​တယ် . network ​ပိုင်း​မှာ professional ​တစ်​ယောက်​မ​ဟုတ်​တဲ့​အ​တွက် ​တစ်​ချို့​နေ​ရာ​လေး​တွေ​မှာ ​လို​အပ်​မှု​များ ​ရှိ​နေ​နိုင်​ပါ​တယ် .)
​အင်​တာ​နက် ​ခွဲ​ယူ​သုံး​စွဲ​ဖို့​ရာ ​နှစ်​လုံး​စ​လုံး​မှာ Lan card ​ရှိ​ဖို့​လို​ပါ​တယ် . ​ဒါ​က ​အ​လွယ်​ကူ​ဆုံး ​နည်း​ပါ . ​မူ​ရင်း​အ​လုံး​က PC ​ဖြစ်​ပြီး ​ခွဲ​ယူ​သုံး​မယ့်​တစ်​လုံး​က notebook ​ဆို​လဲ ​ရ​ပါ​တယ် . notebook ​မှာ wireless ​ပါ​ထား​ပြီး​သား​ပါ . ​ခွဲ​ပုံ​ခွဲ​နည်း​လေး​ကို ​အောက်​မှာ ​ပြ​ပါ့​မယ် .
​ခွဲ​ပေး​မည့် ​မူ​ရင်း​အ​လုံး ​ကို ​ဘယ်​လို setting ​ချ​မ​လဲ .
Start >> Setting >> Network Connections ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ . ​မိ​မိ​လက်​ရှိ​သုံး​နေ​သည့် wireless icon ​လေး​ကို ​တွေ​ရ​မှာ​ပါ . ​ခွဲ​ပေး​မယ့် ​အ​လုံး​က​နေ wireless ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ . ​ပြီး​လျှင် Right click >> properties ​ကို ​ဝင်​လိုက်​ပါ .
Advance ​ကို ​က​လစ်​လိုက်​ပြီး ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း Allow other network user to connect through this computer's internet connection ​ဆို​တာ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​က​လေး ​ပေး​လိုက်​ပါ .
​အဲ့​လို ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ပ​ထ​မ wireless icon ​လေး​ဟာ ​အ​ခု​လို ​ပုံ​လေး​ပြောင်း​သွား​မှာ​ပါ .
​ပ​ထ​မ ​တစ်​လုံး​က ​အင်​တာ​နက် ​သုံး​စွဲ​လို့ ​ရ​နေ​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​ဖြင့် ​ပ​ထ​မ​အ​လုံး​ရဲ့ DNS ​ကို ​သိ​ဖို့​လို​အပ်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​က ​ဒု​တိ​ယ​အ​လုံး​မှာ ​ဖြည့်​ရ​မှာ​မို့​ပါ . wireless to wireless (notebook) ​မှာ​တော့ Notebook ​တော်​တော်​များ​များ​ဟာ dns ​ကို auto config ​လုပ်​ပေး​ပါ​တယ် . ​မ​လုပ်​ပေး​တော့​လဲ ​လက်​နဲ့ ​ရိုက်​ထည့်​ပေါ့ . ​တစ်​ကယ်​လို့ ​ဒု​တိ​ယ​တစ်​လုံး​က PC ​ဖြစ်​နေ​ပြီး lan card ​ဖြင့် ​ချိတ်​လို့ DNS server address ​ကို ​မ​သိ​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​တယ် . ​ဖြည့်​မ​တတ်​ဘူး​ဖြစ်​နေ​ရင် ​မ​ခက်​ပါ​ဘူး . ​အောက်​က​အ​တိုင်း ​ပ​ထ​မ​တစ်​လုံး​ရဲ့ dns address ​ကို ​ယူ​လိုက်​ပါ .
​ပ​ထ​မ​တစ်​လုံး​က​နေ Dns server address ​ဘယ်​လို​ယူ​မ​လဲ .
start>>>> run>>>cmd ​လို့ ​ရိုက်​ထည့်​ပြီး ipconfig /all ​လို့ ​ရိုက်​ထည့်​ပေး​ပါ
​ပြီး​ရင် enter ​ခေါက်​လိုက်​ပါ .
​အဲ့​ဒီ့​မှာ ​ယ​ခု​လက်​ရှိ ​သုံး​နေ​တဲ့ Ip ​ရဲ့ DNS ​လိပ်​စာ​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့​တွေ့​ရ​တာ​ဟာ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဒု​တိ​ယ​အ​လုံး​မှာ ​ဖြည့်​ထည့်​ရ​မယ့် dns ​ပါ . ip address ​မ​တူ​ပေ​မယ့် dns ​က​တော့ ​တူ​မှ ​ရ​ပါ​မယ် . ​ဒါ​လေး​တစ်​ချက်​ကို ​သ​တိ​ထား​မိ​ဖို့​ပဲ ​လို​တာ​ပါ . ​ကျန်​တာ​က​တော့ ​သိပ်​အ​ရေး​မ​ကြီး​ပါ​ဘူး . ​အ​ခု ​ဒီ​မှာ​တော့ ​ကျွန်​တော့် ip address ​နဲ့ dns ​ကို ​ကျွန်​တော် photoshop ​နဲ့ ​ဝါး​ပစ်​လိုက်​ပါ​တယ် . ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ​လို့ ​မေး​ရင်​တော့ ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​ပေါ့​နော် . ​အ​ဟ​ဟ .
​ကဲ ​အ​ခု ​ပ​ထ​မ​အ​လုံး​ရဲ့ dns ​ကို​လဲ​သိ​ပြီ​ဆို​ရင် ​ဒု​တိ​ယ​အ​လုံး​မှာ ​သွား​ဖြည့်​မယ်​ဗျာ . ​သွား​ဖြည့်​တဲ့​နေ​ရာ​မှ ​တစ်​ချက်​က​လေး ​သ​တိ​ထား​ပေး​ပါ .
IP address = "192.168.0.1" (​ကဲ​ဒီ​နေ​ရာ​မှာ ​ပြော​ပြ​စ​ရာ​ရှိ​တာ​က . 192.168.0.1 ​ဆို​တာ​နဲ့ ​အဲ့​ဒီ့ Private ip ​ကို​ပဲ ​အ​သေ ​မ​တွက်​ထား​ပါ​နဲ့ IP Address = "192.168.0.0" ​က​နေ "192.168.255.255" ​အ​ထိ ​ဖြည့်​ထည့်​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​နောက်​ဆုံး​က​ဂ​ဏန်း​မှာ "0.0" ​က​နေ "255.255" ​အ​ထိ ​ထည့်​နိုင်​ပါ​တယ်)
Subnet mask = "255.255.255.0" ​ဆြို​ပီး​ထည့်​ပါ ​မ​ထည့်​ချင်​လဲ TAB ​ခုန်​လိုက်​တာ​နဲ့ auto ​ဖြည့်​ပေး​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​မ​ဖြည့်​ပေး​တော့​လဲ ​ဖြည့်​ထည့်​လိုက်​ပေါ့ .
Dns : --. -- . -- . -- ​က​တော့ ​အ​ပေါ်​မှာ ​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း ​ပ​ထ​မ​တစ်​လုံး ip ​ရဲ့ dns ​ကို ​ဖြည့်​ပေး​ရ​မှာ​ပါ ​ဘယ်​လို dns ​ကို ​ရ​ယူ​မ​လဲ​ဆို​တာ​ကို​လဲ ​ပြော​ပြ​ထား​ပြီး​ပါ​ပြီ .
​အား​လုံး​ပြီး​ရင်​တော့ Ok ​ပေး​လိုက်​ပါ .
​ကဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .